Shellac पलिश के हो? यो हरेक महिला जान्नुपर्छ थियो
आज यो थप shellac कोटिंग नङ प्रयोग गर्न लोकप्रिय बन्दैछ। थाहा नगर्ने ती लागि के shellac छ पालिस, हामी यसलाई निश्चित रूप वार्निश र जेल बीच मा केहि हुन सक्छ कि एक कोटिंग छ भनेर भन्न सकिन्छ। Shellac मात्र आफ्नो नङ सुन्दर बनाउन गर्छ र केही हप्तासम्म सिद्ध मैनीक्योर जाने अनुमति दिन्छ, तर एकै समयमा जो नङ धेरै बलियो हो भन्ने सुनिश्चित गर्न अनुमति दिन्छ एक निश्चित संरचना, छ। साथै, यो ज्यादा देखि ज्यादा क्षति सबै प्रकारका तिनीहरूलाई रक्षा गर्न अनुमति दिन्छ। यो यस्तो भन्ने तथ्यलाई को त्यसैले थाह छ shellac पलिश आफ्नो समय मोल र सधैं प्रयास गर्दै छन् जो हरेक आधुनिक महिला राम्ररी groomed हुनुपर्छ। कोटिंग छैन केवल लागू हुन सक्छ लामो नङ। पनि shellac लागू छोटो नङ। यसको प्रयोग बलियो नङ को घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ नगर्ने ती लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प सकिन्छ।
Shellac सौन्दर्य प्रदान गर्नेछ
तपाईं राम्रो वार्निश को रासायनिक संरचना पोख्त हुनुहुन्छ भने, तपाईंले शायद पहिले नै shellac पलिश र के रासायनिक गुण यो possesses भनेर थाह छ। पहिलो, हामी कोटिंग कुनै पनि एलर्जी प्रतिक्रिया कारण छैन भनेर याद गर्नुहोस्। Shellac formaldehyde समावेश गर्दैन। को नङ कोटिंग को आवेदन प्रविधि के हो? कुनै रहस्य हो - यो एक सामान्य नङ जस्तै तरिकामा लागू गरिएको छ। तर shellac पलिश हटाउने प्रक्रिया रूपमा, त्यसपछि यसको सफल कार्यान्वयन लागि, तपाईं मात्र आवश्यक हुनेछ कृत्रिम नङ को हटाउनका लागि एक माध्यम प्राप्त। यस मामला मा, यो, यो सुविधा मा भिगो एक कपास प्याड संग प्रत्येक नङ र्याप गर्न पन्नी मा र्याप र लागि दस पन्ध्र मिनेट छोड्न भन्दा राम्रो छ। त्यसपछि मैनीक्योर प्रयोग गर्न Resort पर्याप्त सुन्तला लाठी। त्यसैले, अब तपाईंले shellac पलिश के हो थाहा छ, र तपाईं यस कोटिंग मात्र नङ मा सुन्दर देखिन्छ, तर पनि धेरै व्यावहारिक मानिन्छ कि, चाहनुहुन्छ भने तपाईं आफैलाई लागि हेर्न सक्छन्।
सफलतापूर्वक नङ सतह मा shellac लागू गर्न, तपाईँले पहिला सतह तयार हुनुपर्छ। यो गर्न, नङ एक निश्चित आकार दिन, साथै cuticle हटाउन। म एकैचोटि रंग कोट आवेदन गर्नु अघि, तपाईं नङ को एक सुरक्षा तह रूपमा सेवा गर्दैछन् जो जग, लागू गर्नुपर्छ भनेर याद गर्न चाहन्छु। ड्राई आधार भएपछि, कोटिंग नै सीधै लागू गरियो। यो shellac पलिश (फोटो यो प्रक्रिया विशेष पत्रिका पाउन सकिन्छ) संग कोटिंग एक प्राथमिक रंग, र विभिन्न रंग प्रयोग गरेर बाहिर गर्न सकिन्छ कि थपियो हुन सक्छ। अर्को चरण सतह सुक्खामा छ। यो केवल जीवाणुरोधी दीपक अन्तर्गत त्यसो गर्न उचित छ। रंग संतृप्त र थप झन्झन् देख्यो थियो, यो एक र दुई पत्रहरु मा कोटिंग लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ। दोस्रो तह सुकेको छ पछि पनि भनिन्छ फिक्सर लागू गर्नुपर्छ। एक विशेष तरल यसलाई सुकाएपछि छ टास्ने तह सतह हटाइयो।
मैनीक्योर लागि ICE दीपक: मुख्य फाइदा र बेफाइदा
दीपक संकर पलिश: तस्बिर र समीक्षा
पोर्टफोलियो छात्र प्राथमिक विद्यालय: संयुक्त काम र विकास गर्न प्रोत्साहन
लुम्बोस्कोल स्पिन को हेरविचार: उपचार, लक्षण
म कसरी मानिसहरू VKontakte समूहमा थप्छु? यसलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनुहोस्!
कुनै पनि कार्य यो मेटिएको छैन जो फाइल मेट्न छ भन्दा सजिलो छ!